Ihe nkiri Redhills - n'ime obodo
Gbanahụ nkịtị na otu ụbọchị na Redhills Adventure Kildare. Dị naanị 5kms site na Obodo Kildare, nkeji iri atọ si Newlands Cross na Dublin na n'okpuru elekere 30 site na Athlone, Kilkenny na Carlow, Redhills na -aghọ ngwa ngwa 'ga -eme' na ndị mmadụ na -eme njem na Ireland niile ileta/soro ha gwuo egwuregwu.
Ebumnuche Redhills Adventure (enweghị pun zubere) iji nye gị ụbọchị emechiri emechi nke nwere ihe dị iche iche na ụkpụrụ, ihe egwuregwu na nchekwa. Ihe omume bụ njem dị nro dị ala nke dabara maka ọkwa na mmasị niile. Ahụmịhe ahụ dị iche dabere na afọ onye ọ bụla ma ọ bụ ụdị ọrụ dịka ọmụmaatụ ịma aka ụlọ ebe achọrọ nka nka na ọrụ mkpado ebe achọrọ mgbatị ahụ.
Họrọ njem gị site na mmemme mkpado mmetụta dị ala iji wee nwee ọ funụ na oke ma ọ bụ lelee usoro mwakpo na mmemme ụlọ. Enweghị otu? Enweghị ahụmịhe? Enweghị gia? Nsogbu adịghị. Redhills Adventure Kildare na -akwado ndị mmadụ n'otu n'otu yana otu sitere na ndị sonyere 8 ruo 150 maka afọ 8 gbagoro!
Mepee afọ niile, Mọnde ruo Sọnde maka ntinye akwụkwọ maka asatọ ma ọ bụ karịa na ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike sonye na nnọkọ egwuregwu mkpado mepere emepe kwa izu ụka niile ka ị ghara ịchọ otu.
Ebumnuche Redhills Adventure bụ na ndị ahịa ha na -ahapụ na -enwe afọ ojuju na ha enweela ọ funụ, ihe na -akpali akpali, ụbọchị adrenalin dabara na ike ha, nka ha ma ọ bụ ọkwa ha chọrọ.
Redhills Adventure na -achọ maka -
• Ezinụlọ, Enyi, ụbọchị ọmụmụ (7+ na ndị okenye)
• Njegharị ụlọ akwụkwọ (afọ 8-12)
• Anụ ele na nne okuko
• Ụlọ ọrụ ụlọ na otu
• Onye na -enwe mmasị n'ihe omume ntụrụndụ (afọ 12 +)
• Egwuregwu na Ntorobịa-Ndị Scout na Nduzi, Otu ndị nwere nsogbu, Mmekọrịta egwuregwu Kildare, GAA, bọọlụ, otu egwuregwu Rugby.
Adventure & Ihe, Outdoors, Nwee ezumike ezinụlọ, Kildare
Obodo Kildare, Ireland.
Mọnde - Sun: 10am - 5pm